Manome toro-hevitra momba ny fomba hamongorana ny Darodar.Com Traffic referral
Ny tsy fahafantarana ny fifamoivoizana tsy fantatra dia lasa zava-dehibe ho an'ny webmaster rehetra, tompon'ny tranonkala ary bilaogera. Hita ao amin'ny kaonty Google Analytics koa ny fifamoivoizana an-tserasera Darodar.com ary manangona ny angon-drakitra, ny mpanaraka sy ny data momba ny analytics. Manimba ny lazan'ny tranonkala iray manontolo izy io ary mampihena tsikelikely ny laharan-tsarinao amin'ny valin'ny fikarohana . Ambonin'izany, ny fampielezan-tserasera Darodar.com dia mampitombo ny halaviran-tseranana satria ny spam dia mipetraka ao amin'ny tranonkala samihafa, ka mamela ny fahatsapana diso amin'ny ankabeazan'ny maro. Ity karazana fifamoivoizana ity dia mampiasa ny bandefitry ny tranonkala ary miteraka olana amin'ny webmasters.
Ity toro-lalana ity, Ivan Konovalov, Semalt Mpitantana Success Suisse, dia hanampy anao hanaisotra ny fifamoivoizana momba ny referral darodar.com ao amin'ny kaonty Google Analytics. Azonao atao ny manakana ny spam toy ny resa-be ao amin'ny .htaccess ary tsy hahazo ny trafic ao amin'ny darodar.com amin'ny ho avy.
Fampidirana ny darodar.com
Darodar.com dia anarana nomena anarana izay ampiasaina hampandraisana anjara ny mpampiasa amin'ny spam referrer. Izy io dia mikendry ny manimba ny antontan-kevitra momba ny fanadihadiana ao amin'ny tranonkala. Ny spam Darodar.com referrer dia natao mba hamoronana fangatahana maro ho an'ny tranonkala aterineto..Ireo mpitsoa-ponenana dia mahazo tombony amin'ity karazana fifamoivoizana ity ary mamoaka dokam-barotra ny orinasany, manimba ny votoatin'ny tranonkala amin'ny valin'ny fikarohana. Ny tsy mitongilana dia ny fampidirana ny darodar.com sy ireo tranonkala hafa mitovy amin'izany dia mamorona fangatahana miverimberina ary miteraka olana ho anao. Ny spam referatio dia iray amin'ireo tetika mampiahiahy indrindra amin'ny aterineto. Ampahany betsaka amin'ny fampiroboroboana ny votoaty sy ny spammers ny fizotran'ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao noho ny anton'izany. Te hanatsara ny tranonkalany na ny fandaharan'asany manokana izy ireo ary hitady ny fomba hanatsarana ny laharana ao amin'ny Google Search. Miaraka amin'ny spam-referendum darodar.com, nahazo rindran-dalana betsaka amin'ny tranokalany izy ireo
Tsy mampidi-doza ny tranonkala Darodar.com momba ny tranonkalanao, saingy hampihena ny kalitaon'ny fifamoivoizany izany. Midika izany fa tsy ho afaka hametraka ny tranokalanao araka ny tokony ho izy i Google satria maro amin'ireo mpitsidika no tsy afaka miditra amin'ny votoatinao. Maro ireo tranonkala mifandraika amin'ny darodar.com, ary raha mitsidika ireo rohy ireo ianao, dia haverina mankany amin'ny tranonkala toy ny ilovevitaly.com sy ny hafa.
Mibahana ny fifamoivoizana momba ny referral darodar.com amin'ny Google Analytics
Raha te hisoroka spam ny referral darodar.com amin'ny Google Analytics ianao, dia tokony esorinao tsy ho ela ny solosaina. Voalohany indrindra, tokony hanokatra ny kaonty Google Analytics ianao ary hahita ny rindran'ingana Admin mba hikirakirana ny safidy All Filters. Eto dia tsindrio ny safidy New Filter ho an'ny famoronana sivana araka ny zavatra takinao. Rehefa avy namorona filiro ampy ianao, dia ampio hoe darodar.com ho anaran'ny sivana ianao ary misafidy ny Custom Filter Type. Ao amin'ny safidin'ny sivana, tokony hifidy ny loharano famelomana ianao ary tsindrio ny safidy momba ny sivana. Ampio darodar.com eto ary tsindrio raha hamonjy ny fanovana.
Sasao ny fifamoivoizana momba ny referanda ao darodar.com amin'ny alàlan'ny tahiry .htaccess
Azo atao ny manakana ny fifamoivoizana momba ny referral darodar.com amin'ny fanampiana ny rakitra .htaccess anao. Noho izany, tokony hampiditra fehezan-dalàna voafaritra amin'ity rakitra ity ianao ary tsindrio amin'ny Safidy Save raha te hamonjy ireo toe-javatra rehetra ireo Source .